Suudal - Wikipedia
Boga "Tahriib" halkan ayaa loo soo wareejiyay.
Suudal (; ) sidoo kale loo yaqaano Dhuyaal iyo Tahriib, waa socdaal qof ama koox dad ah sameeyaan kuwaasi oo ku socda deegaan kale oo ka duwan wadankooga si ay u helaan shaqo, dhaqaale, nabadgelyo, iyo nolol fiican. Inta ugu badan socdaalka noocan ahi waa mid sharci daro ah kaasi oo keena khatar iyo halis badan ooy ka mid tahay xadhig, dhac, kufsi, iyo dhimasho.
2 Dhibaatooyinka Suudalka
3 Dalalka Suudalka Lagu Sii Maro
Suudalku waa socdaal aan ogolaasho loo haysan badiyaana dadku u qoraan qaab Af Soomaali ah oo ka soo jeeda Af Carabi. Erayga Tahriib wuxuu ugu batay Af Soomaaliga in dhulka la sii maro uu u badanyahay dhul Carbeed, inta u dhexaysa Suudaan ilaa iyo Liibiya oo ah halka badda looga sii gudbo Yurub. Socodkii waa tahriib, dadkii waa tahriibayaal, qanqaabiyaalkii waa tahriibiyeyaal oo marka dambe isku rogga magafe. kaas oo marka dambe dhuyaal socodka faramariya ama naftoodaba halis geliya. Suudal waa hayaanka inta badan ay ku talaabo qaadaan dad ka dhoofaya dhulkooda iyagoo sii marayo xaduudo ilaalsan ujeedkooduna yahay inay dhuumaalaysi iyo habayn guure ku maraan dhulkaas iyo xaduudadahaas ilaalsan. Qofka u bareeraa socod suudal ama dhuyaal ah wuxuu ku tala galaa geeri iyo nolal inuu ka mirro dhaliyo socdaalkaas. Suudal waa isbiimayn socdaal kaas oo aan lahayn ammin go'an basle leh kalahaad ama jarmaad hore, guure, baqool ama dhalandhool, caroow iyo socod lug iyo wixii gaadiid la heli karo la dul saarnaado dharaar iyo habayn tan iyo inta laga gaarayo meelo astaamaysan oo gashiimaysi loogu sii nasto.
Suudalka ama dhuyaalka wuxuu leeyahay dhibaatooyin aan la soo koobi karin kuwaas oo iskugu jira:
Daal, gaajo iyo haraad joogta ah
jir dil loo gaysto dadka dhuyaalka u bareeray
xarig cidii doonta ay iska xirato dadka ogolaasho la'aanta iska hayaamayo
kufsi loo gaysto dumarka
geeri ka timaada daalka, xanuuno ka dhasha socodka dheer, jir dil ama birayn ama toogasho bareer ah
Dhibaatada suudalka waxaa ay dhibaato raagto ku ridaan qofka, qoyska iyo qaranka uu ka socdaalay wiilka ama gabadha dhuyaalka go'aandsay. Dhul lama degaan ah, xaduudo la ilaalsanayo iyo bado la raaco doomo aan tayo lahayn oo inta badan dadka ku harqadaan ayaa u dambaysa qofka doorbiday socdaal suudal (tahriib) ah. Qoyska suudal socdaalaha ayaa maal aduun ku baxsho marka uu magafe gacanta ku dhigo wiilkoodii ama gabadhoodii soo joog laga kari waayay.
Dalalka Suudalka Lagu Sii Maro
Qaarada Afrika meelo badan oo ka mid ah ayay ka ambabaxaan dadka suudalka ku mara dhulka lama degaanka ah ee Suudaan ilaa Liibiya looga sii talaabo Yurub. Waxaa la isku raacay in dhulka la sii maro uu dhib badanyahay isla markaana dadka dhulalkaas ku dhaqan ay arxan daranyhiin. Waxaa wargaysyada Af Soomaaliga ku baxa iyo barraha Internet-ka laga dheehanayay waayahan dambe bulsho Soomaaliyeed oo tiro la'aan ah ugu rogmatay bad iyo beri intii ay ku gudo jireen hayaan suudal ah. Dowlad iyo dadwayne ehbiyay socdaalka suudalka ahna ma jiraan ilaa iyo maanta.
Warbixin Dhibaatada Suudal (Tahriibka)
Af-Soomaaligu wuu baa'bi'i rabaa mar dhow[dead link]
↑ Baro-Bixinta Ay Ereyada Qalaad Ku Hayaan Af-Soomaaliga(WQ: Yuusuf Cismaan Cabdille "Shaacir"[dead link]
. Refugee Council http://www.refugeecouncil.org.uk/policy_research/the_truth_about_asylum/the_facts_about_asylum. Soo qaatay 7 September 2015. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ Warbixin ku saabsan dhibaatada heysata Af-Soomaaliga; [hadhwanaagnews.ca ][dead link]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Suudal&oldid=215019"